ဆွီဒင်အထက်တန်းကျောင်းသားများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်သဘောထားများ (၂၀၀၉) - Your Brain On Porn
EUR J ကို contraceptives Reprod ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု။ 2009 Aug;14(4):277-84. doi: 10.1080/13625180903028171.
Häggström-Nordin E ကို, Tydén T က, Hanson ဦး, Larsson M က.
အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေးဌာန၊ Uppsala တက္ကသိုလ်၊ Uppsala, ဆွီဒင်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
စားသုံးမှုနှင့်တတိယနှစ်အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားမိဘများထံသို့လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ညစ်ညမ်းဆီသို့သဘောထားများစုံစမ်းရန်။
တစ်ဦးယုတ်အသက်အရွယ် 718 နှစ်ပေါင်းအတူ 18 ကျောင်းသားတစ်ဦးကကျပန်းနမူနာ (အကွာအဝေး 17-21) 89 မေးခွန်းများကိုပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးစာသင်ခန်းမေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သည်။
သီအိုရီလေ့လာမှုအစီအစဉ်များထက်လက်တွေ့ကျသောကျောင်းသားများသည်လက်တွေ့ကျသောအလုပ်ရှိသည့်မိဘများရှိသည် (p <0.001) သီအိုရီဆိုင်ရာပရိုဂရမ်များတက်သောကျောင်းသားများအတွက်မိဘများသည်သူတို့၏အိမ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည် (p <0.001) ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသားများကပိုမိုများပြားသည် (98% နှင့် 72%; p <0.001)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း (p <0.05) သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမှလှုံ့ဆော်သောအပြုအမူများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သီအိုရီကျောင်းသားများထက် ပို၍ လက်တွေ့ကျသည်။ သီအိုရီအရလက်တွေ့ကျသောအမျိုးသားကျောင်းသားများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသားများထက် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ရှိသည် (p <0.001; p = 0.037) ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်မသေချာမရေရာမှုများနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်မြင်ချက်ကိုကျောင်းသားများထက်အမျိုးသားများပိုများသည်။
ကျောင်းသားများ၏အထက်တန်းကျောင်းအစီအစဉ်ရွေးချယ်မှုများသည်သူတို့၏လူမှုရေးနောက်ခံကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအဓိကအားဖြင့်အထီးကျောင်းသားများကစားသုံးခဲ့ကြပြီး၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားများရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးများသည်အများအားဖြင့်အပျက်သဘောဆောင်သောသဘောထားများရှိကြသည်။ လိင်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်လိင်နှင့်လေ့လာမှုအစီအစဉ်များအကြားရှိကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအကြံပေးခြင်းနှင့်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပညာရေးတို့တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။